Zoma Faha efatra amin'ny Paka -30/04/2021 - Joany 14-1-6 | FKMP
Zoma Faha efatra amin’ny Paka -30/04/2021 – Joany 14-1-6
« Tamin’izany andro izany dia hoy i Jesoa tamin’ny mpianany: Aoka tsy hitebiteby ny fonareo. Mino an’Andriamanitra hianareo, ka minoa ahy koa.
Misy fitoerana maro ao an-tranon’ny Raiko; raha tsy izany, dia efa nilaza taminareo aho; fa handeha aho hanamboatra fitoerana ho anareo, ary rahefa lasa aho ka voavoatra ny fitoerana ho anareo, dia ho avy indray aho haka anareo ho any amiko, dia izay itoerako no hitoeranareo koa.
Ary fantatrareo koa ny làlana ho any amin’izay alehako. Dia hoy Tomà taminy: Tsy fantatray izay alehanao, Tompoko, ka ahoana no ahafantaranay ny làlana? Ary hoy Jesoa taminy: Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako. »
Manahirakirana ihany ny vanim-potoana ianantsika ankehitriny izao satria dia mandravarava tokoa ny valanaretina. Manoloana ny fahafatesana anefa dia hoy isika Malagasy hoe « tombon-dalana ny azy fa isika rehetra mbola ho any », ary zary teny ifankaherezana matetika ny hoe « mbola hifankahita ihany indray andro any, amin’ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty». Toa miendrika toa izany eto ny resak’i Jesoa sy ireo mpianany rehefa nanipy resaka ny amin’ny handehanany i Jesoa. Mampalahelo sy mampitaintaina tokoa ny fisarahana saingy nampahatsiahivin’i Jesoa ireo mpianany fa ny finoana, ny finoana an’Andriamanitra dia fitaovana iray afaka entina misedra izany alahelo sy tebiteby izany.
Rehefa handeha ihany koa i Jesoa dia tsy hoe handefa fa te handao fa kosa handeha hanomana toerana ho azy ireo, ho antsika, any antranon’ny Ray. Hafa ihany izany hoe misy manomana na mamandrika teorana ho anao izany. Ary any angaha hoy aho ilay toerana antenaintsika Malagasy hifankahitana amin’ireo havana sy sakaiza efa lasana, rehefa indray andro any. Io ilay paradisa.
Ny tokony hatao, na ny tokony haleha mba hahatongavana any ihany koa dia efa natoron’i Jesoa ao anatin’ny Evanjely anio : « Tsy misy mankany amin’ny Ray raha tsy amin’ny alalako » hoy izy. Na niteny ihany koa aza anefa izy hoe : « Izaho no lalana sy fahamarinana ary fianana » dia mino aho fa samy hanana ny tena lalany ny tsirairay rehefa hanatanteraka izany teniny izany.
Aoka tsy ho hadinointsika fa manomboka ety antany ny paradisa. Ny fanarahantsika ny dian’i Jesoa dia efa fanorenana sahady ny anjara toerantsika any amin’ny Ray, ary izany dia tsara atomboka dieny mbola ety ambonin’ny tany.
Previous Post: Alakamisy Faha efatra amin’ny Paka -29/04/2021 – Matio 11,25-30
Next Post: Asabotsy Faha efatra amin’ny Paka -01/05/2021 – Joany 14, 7-14